GRC Sommth surface-GRC Sommth surface-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>GRC caadada dhamaadka-sare>Dusha sare ee GRC Sommth
Number Model: Dusha sare ee siman ee GRC
GRC (Glass Fiber Re Informed Concrete) waxaa sidoo kale loo yaqaan GRC. Magaceeda Shiineysku waa dhalo fiber ah oo la xoojiyay Waa maaddo isku dhafan oo u adeegsaneysa hoobiye sibidhka sidii aaladda aasaasiga ah iyo fiber galaas u adkaysi u ah sheyga xoojinta. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ku jiraan waxyaabo kale oo lagu daro kobcinta waxqabadka, midabaynta, iwm. Nidaamka wax soo saarka ee GRC waa mid aad u gaar ah. Muraayadaha muraayadda ah ee la diyaariyey ayaa lagu buufiyaa shaashadda oo leh qaab wanaagsan, taas oo hubin karta in badeecadu ku guuleysato isku-darka aad u fiican, adkeysiga iyo iska caabbinta. Tayada sheyga sidaas loo soo saaray aad ayuu uga duwan yahay tan caadiga ah ee geeddi-socodka caadiga ah ee la taaban karo. Yurub iyo Ameerika, xaashida GFRC-lakabka ah ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa sida gudida qurxinta darbiga bannaanka.
5. Yaraynta tamarta iyo yareynta qulqulaha: marka la barbar dhigo qaababka kale ee loo xirxiro, GRC waxay isticmaashaa tamar yar inta ay ku gudajireyso sameynta iyo rakibida. Aqoonyahanada reer Japan waxay sameeyeen isbarbar dhig kaarboonka kaarboonka ah ee udhaxeeya albaabo GRC iyo derbiga la taaban karo ee la xoojiyey, iyo isticmaalka alwaaxa GRC wuxuu yareyn karaa qiiqa kaarboonka 30%.
Waxtarka GRC Hollowed-out
Saamaynta biyo-dhaqidda GRC
Guddi isku dhafan oo hordhac ah